Voatery nohenjehina teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato mihitsy I Ahmad, filohan’ny Fmf sady filoha lefitry ny Kom, izay efa miandry ny sidina makany Zambia. Tao amin’ny Ela-bola Ivato, araka izany no nanaovana ny fivoriana. Nodinihina tamin’izany ny fomba hoentina manantanteraka ny fifidianana amin’ny 18 Janoary , araka ny tetiandro napetraky ny Kom.
“Tsy maintsy hotanterahinaio fifidianana io na inona na inona miseho”, hoy ny fanapahan-kevitra noraisin’ireo filohan’ny federasiona.
“Taratasy fampiantsoana hivory no azonay avy amin’ny Kom, ka nahatonga anay hanatrika izany. Tsy mba nandefa taratasy fanafoanana izany akory izahay”, hoy i Siteny Randrianasoloniaiko, filohan’ny federasiona malagasin’ny Judo, sady isan’ireo kandidà hirotsaka amin’izany rafitra izany.
“Ny filohan’ny Kom ,o ,ampita afatra tamin’ny olona iray fan oho ny raharaham-pirenena doa voatazona any izy ka tsy afaka manatrika izany fivoriana izany”, hoy I Jean Michel Ramaroson, filohan’ny federasiona malagasin’ny basket, isan’ireo efa nanambara tamin’ny fomba ofisialy koa fa “hilatsaka hofidiana eo amin’ny toeran’ny Kom”.
Ny sekretera jeneralin’ny Kom, Solofo Barijaona Andrianaivomanana, kosa dia efa tsy eto an-toerana fa lasa any Lausanne, araka ny tsilian-tsofina. Izy no tokony hitarika ny fivoriana teto rehefa tsy eon y filoha.